> Resource > Talooyin > Wedding Martiqaad Card - Sida loo DIY ah Martiqaad Card Wedding gaar ah
Waa waxa ugu yaab leh in aad noloshaada si aad u guursato aad la jecel yahay. Oo maalintii dheh "Haa, waan samayn." waa mid ka mid ah maanta ugu soo dejinta inta aad nooshahay. Laakiin ka hor maalinta arooska, waa in aad haysataa xisbiga hawlgelinta, xisbiga Roob idinkoo Shifaysan (ama xisbiga Bachelorette ah), Xisbiga casho tababarasho iyo wixii la mid ah. Si ay u muujiyaan saaxiibadaa iyo qoyskaaga aad farxad, daacadnimo, ixtiraam, iyo ka badan, casumaad arooska gaar ah u diraya noqon doontaa waajib ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan samaynta kaarka casuumad aroos qurux badan.
Talooyin Qaar ka mid ah kaadhka arooska martiqaadka
Ma arooska wanaagsan si loo hubiyo inaad u samaysaa aragti weyn ugu horeysay, qaar ka mid ah martiqaad arooska talooyin card iyo XISNUL hoos ku qoran.
Urursada liisaska soo martiqaaday aad ka hor inta aanad kaararka martiqaadka si loo hubiyo in qofna looma eego.
Haddii casuumay laba qof wadaagto guri ama wada nool, ama lamaane is qaba oo leh magacyo kala duwan, waxay isticmaalaan labada magacyada oo buuxa.
Higgaad waqti gaar ah oo ay ku jirto saacad ah, taariikhda iyo sanadka iyo cinwaanka, oo ay ku jiraan Street, Road iyo Avenue.
Black waxaa caadi ahaan loo isticmaalo sida midabka hadalka iyo waa arrin xarrago leh iyo ugeeyaan.
Haddii aadan rabin in carruurta si ay u yimaadaan arooska, ma sheegayaan in kaarka martiqaad arooska.
About xisbiga shaqaysiinta, qubeyska idinkoo Shifaysan, iwm
Baro waxa Xisbi walba uu ku yahay iyo marka ay noqon doonaan caawimo iyo kuwa lagu martiqaadi doonaa si aad u hesho fikrad guud ee aad martiqaad arooska.
Xisbiga Goobjoognimada: Sida caadiga ah dumiyey in la sameeyo waalidiinta labada lamaane ee 1-3 bilood ka dib soo jeedinta in uu ku dhawaaqo iyo dabaal shaqaysiinta, iyo waqti isku mid ah, ka caawin arooska guests mustaqbalka si aad u hesho in la ogaado mid kale. Guud ahaan, qaraabada iyo saaxiibada kuu dhow oo loogu yeedhi. Dhaqan ahaan, waalidiinta aroosadda ayaa marti xisbiga shaqaysiinta, laakiin lamaane badan oo casri ah oo marti ay xaflad gaar ah. Baro sida loo sameeyo martiqaad xisbiga hawlgelinta .
Roob ayaa idinkoo Shifaysan: qabtay 1-2 bilood ka hor arooska sida xisbiga hadiyad bixinta a a aroosadda-ka-ahaan la eegaayo in iyada arooska. Sida caadiga ah aan saaxiibbadeeda sida gabadh sharaf, malxiis ama saaxiibbo aad hooyadiis ku dhow oo loogu yeedhi. Baro sida loo sameeyo martiqaad Roob idinkoo Shifaysan .
Xisbiga Bachelorette The: qabtay dhowr usbuuc qof dumar ah oo ku saabsan in la guursan ka hor maalinta arooska weyn. Waxaa caadi ah in wareegga bulshada iyo waxaa qaabeeyey ka dib markii xisbiga bachelor ah. Waxa ay noqon doontaa waqti aad u weyn u saaxiib ah in ay isu tagaan ka hor maalinta arooska. Baro sida loo sameeyo martiqaad xisbiga Bachelorette .
Casho The tababarasho: Sida caadiga ah lagu qabtay ka dib markii tababarasho arooska iyo habeen ka hor xafladda arooska. Dadka u sameeyaan xaflad aroos ah lagu martiqaadi doonaa. Qaraabada iyo saaxiibada aroosadda oo aroos kulmi kartaa casho tababarasho iyo raaxaystaan. Waxaa sidoo kale fursad ay lamaanahan u mahadceliyo qof walba ee ay caawiyo diyaarinta arooska. Baro sida loo sameeyo casuumad casho ah tababarasho .
Si lagaaga caawiyo in aad si fudud u samayn card casuumad aroos, DVD Muqaal dhise kaa caawin kara. Download software si ay leeyihiin isku day ah!